Krizim-bary Miala bala ny fitondrana
Fanafody amidy eny amin’ny tsenakely Tena tsy azo hatao, hoy ny ministeran’ny fahasalamana
Betsaka ireo tsenakely lasa mivaro-panafody ankehitriny. Ny mampalahelo aza, hoy dokotera Manitra Rakotoarivony anisan’ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka dia ny fokontany indray no tena mandrisika ireny mpivarotra ireny hanao ny asany satria lavitra toeram-pivarotam-panafody, hono, izy ireo.
Raharaha fofon-kelika Niala tsiny ny depiote
Ny talata 13 martsa teo, tokony ho tamin’ny 11 ora dia nisy asam-baomiera itambarambe tsy azon’ny besinimaro atrehina tety Tsimbazaza, hoy ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena, Mahazoasy Freddy, raha niverina nanazava ny tranga teny amin’ny antenimiera omaly.
Fampijaliana vahoaka tany Antsakabary Minia mikipy ny fanjakana
Manoloana ny horonantsary miparitaka mampiseho mazava ny fampijalian’ireo polisy ny mponin’Antsakabary, dia mangataka amin’ny fanjakana Malagasy ny hanaovana fanadihadiana tsy mitanila momba ny fitondran-tenan’ireo polisy ny Amnesty International noho ny fiahiana fa izy ireo no tompon’antoka tamin’ny loza amin’atambo, ary tokony hajaina ny fitsipika iraisam-pirenena. Tokony hanonitra ny fahavoazana manontolon’ireo vahoaka lasibatra ihany koa ny fanjakana.
Jirama Mandroseza Tsy maintsy notapahana ny rano satria maloto
Nisy faritra maro nahitana fahatapahan-drano teto an-drenivohitra omaly tokony ho tamin’ny 9ora maraina hatramin’ny 2 ora sy sasany tolakandro teo ho eo. Anisan’izany Ambohijatovo, Faravohitra, Manjakaray.
Tovovavy bevohokan’ny anadahiny Nodidiany ny antsy ny tendan’ilay menaky ny ainy
Tovovavy iray tsy ampy taona, avy any amin’ny kaominina Ambatomiady no fatantra fa nahavita namono ny zaza naterany, tao Antanifotsy-Vakinankaratra omaly alakamisy 15 martsa.
Tetikasa lalankely eto an-drenivohitra 12,9 miliara ariary no nomen’ny Frantsay
Nifarana ny tetikasa lalankely andiany faha-2 eto Antananarivo novatsian’ny sampandraharaha Frantsay momba ny fampandrosoana na ny AFD vola hatrany amin’ny 5 tapitrisa Euros na 12,9 miliara ariary.
Paositra Malagasy Hodinihinan’ny UPAP ny fampandrosoana azy
Omaly no natao tetsy amin’ny hotely Ibis Ankorondrano ny fanaovan-tsonia hanaovana ilay fikaonan-doha tsy ara-potoanan’ireo solontenan’ny fikambanan’ny firenena Afrikana momban’ny paositra (UPAP).
Efa nanao antso avo ny avy eo anivon’ireo mpianatra sy mpampianatra mpikaroka ary ireo ekonomista nandalo rehetra teny anivon’ny oniversiten’Antananarivo ny faran’ny herinandro teo
fa efa fanairana mainty fa tsy mena intsony no mahazo ny tontolon’ny toekarena eto Madagasikara ankehitriny. Misaona ny toekarena ary miakatra hatrany ny vidin-tsolika sy ny vidim-bary. Manoloana ity tranga farany ity moa dia nidina nanara-maso ny vidim-bary teny Anosibe omaly ny praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier sy ny delegasionina notarihin’ny minisitry varotra sy ny fanjifana, Chabani Nourdine. Nilaza ny praiminisitra fa niaraha-nahita fa vokatry ny fiovaovan’ny toetr’andro izay nitranga tamin’ny voalohan’ny taona no nahatonga ny fihenan’ny voka-bary tato amin’ny tsena anatiny ka nampiakatra ny vidim-bary teto. Niaraha-nahita teo, hoy izy anefa, fa mora kokoa kosa ny vidin’ireo vary nohafarana ary mila tohizana ny fidinany. Raha 1620 ariary ny kilao eny amin’ny mpamongady dia tokony ho 1720 ariary kosa ny vidin’ireo vary nohafarana eny an-tsena ho fifampitsinjovana. Ezahana ny hitobahan’ny entana manerana ny nosy sy ny fanamorana ny dingana rehetra ahafahana mampihena ny vidim-bary. Hotobahana vary avy any ivelany ary ve eto hamonoana ny tsena anatiny ?